Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegtay in ay furi doonaan wadooyinka xiran | SMC
Home WARARKA MAANTA Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegtay in ay furi doonaan wadooyinka xiran
Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegtay in ay furi doonaan wadooyinka xiran
Ciidamo ka tirsan Militariga Somalia ayaa waxaa ay bilaabeen in ay dib u dhis ku sameeyaan waddada isku xirta Jannaale iyo Buufow bacaad oo al-shabaab ay jareen, iyadoona arintan ay ka hadleen Masuuliyiinta maamulka Koofur galbeed Somalia.
Wasiirka arimaha ee maamulka Koofur Galbeed soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in maamulka Koofur galbeed ay ku guuleysteen in ay dib u furaan wadada isku xirta Jannaale iyo Buufow bacaad oo ay go’doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Sidoo kale Wasiirka ayaa uu sheegay in Al-Shabaab ay dhibaato u geysteen shacabka ku nool gobolka shabeellada Hoose.
Hadalka wasiirka arimaha gudaha Maamulka Koofur Galbeed ayaa waxaa uu ku soo aadayaa kadib markii masuuliyiin ka tirsan maamulka Koofur Galbeed ay booqasho ku tageen wadada isku xirta Jannaale iyo Buufow bacaad ee gobolka shabeellada Hoose.
Previous articleDhageyso:-Maxaa keenay walaaca laga qabo muddo kororsi ay sameystaan Madaxda DFS?
Next articleDhageyso:-Maamulka Gobolka Banaadir oo ka hadlay qarixii ka dhacay Muqdisho